ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးညီလာခံတွင် ကန်သာယာဆေးရုံကြီး ''မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိ? - Yangon Media Group
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးညီလာခံတွင် ကန်သာယာဆေးရုံကြီး ”မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိ?
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈- အိန္ဒိယင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် World Health & Wellness Congress (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာ ရေးညီလာခံ)တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကန်သာယာအထူး ကုဆေးရုံကြီးမှ ”မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂလိက နှလုံးအထူးကုဆေးရုံဆု”ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါညီလာခံကို World Corporate Social Responsibility Federation , Chief Management Organization Asia တို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ် ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။
ကန်သာယာ ဆေးရုံကြီးကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာလတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဆေးရုံအဖြစ် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အချိန်မှစတင်၍ ယနေ့ချိန်အထိ နှလုံးသွေးကြောချဲ့ကုသခြင်း၊ နှလုံးခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ဆေးကုသခြင်း၊ ကျောက် ကပ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအထူးဆေး စစ်ခြင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာကုသမှုများပေးအပ် နိုင်သည့်အတွက်ဆုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆေးရုံကြီးသည် ”မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂလိက နှလုံးအထူးကုဆေးရုံဆု” The Best Private Cardiac Hospital in Myanmar ဆုအပြင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင်လည်း စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် Chief Management Organization Asia မှ ပေးအပ်သည့်(လူနာများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု အကောင်းဆုံးဆု)The Best Patient Safety Initiative Award နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေ စိုက် World Quality Assurance Ltd. (WQA) မှပေးအပ်သည့် ISO (9001:2015)Certificate များကိုလည်း ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပါတီကြီးများ၏ လိုဂိုသုံးကာ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ခြင်းကြောင့် မမျှတမှုဖြစ်ပေါ်မည်ကု??
မြန်မာယူ-၂၂ အသင်း ပွဲဦးထွက်ပွဲစဉ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားယူ-၂၂ အသင်းကို သရေသာကစားနိုင်ခဲ့
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai နှင့် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Jennie တို့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဟု အတည်ပြု